Ogaden News Agency (ONA) – Tuuga wuxuu ugu neceb yahay Booliska, Dambiilayaasha Dagaalkana maxkamadda ICC
Tuuga wuxuu ugu neceb yahay Booliska, Dambiilayaasha Dagaalkana maxkamadda ICC
Sayidinaa Cali Abii-Daalib Allaha ka raali noqdee ayaa markii ay kitaabka Quraanka kor u qaadeen kooxdii ka soo horjeeday iyagoo leh kan ayaa inakala xukumaya yidhi waa hadal xaq ah hasa ahaatee lagu doonayo baadil.
Haatan R/Wasaaraha Itobiya markuu yidhi Maxkamadda Caalamiga ee Dambiyadda (ICC), waxay dabagashaa un dawladaha yaryar een awooda lahayn (Akhri), waxaad moodaa inay dhab tahay hasa ahaatee uu ku doonayo xaqdarro cad, sababtoo Itobiya waa dalka 1aad ee Afrikaanka ah een ilaalinin xuquuda aadanaha oo aan lagaba aqoonin in la baadho xad-gudub lagu sameeyay dad shacab ah. Sidaa daraadeed, isagoo ka duulaya wax run u eg oo ah in ilaa hadda 90% dambiyada ay qaaday ama miiska u saaran maxkamadda ICC lagu fuliyay un siyaasiyiin Afrikaan ah, ayuu R/wasaaraha Itobiya ololahan ku qaaday maxkamadda suu u difaaco gacan ku-dhiiglayaasha xasuuqa ka wada Ogadenya iyo dalka Itobiya gabi ahaantii. Inkastoo aan la odhan karin xaqdarro ayaa lagu xukumay ama lagu haystaa siyaasiyiinta Afrikaanka ah ee la xukumay, hadana caalamka waxa ka socda ee loo gaysnayo xuquuqda aadanaha kama dhicin oo kali qaarada Afrika. Dalalka waaweyn ee Golaha Amaanka ku leh codka Veto-ga ayaa ugu horeeya kuwa dambiyada ka galay ama shucuub kale ama shacbigooda. Waxaana dhacday oo marqaati ma doonto ah, in isla dawladahaa waaweyn eel eh codka Veto-ga ay ka difaacaan dawladaha xulufada la’aha ee dambiyada iyo xasuuqa ku haya shacabkooda. Bariga dhexe ayaana tusaale cad loo soo qaadan karaa.
Taasoo jirta ayaa waxaa xaqiiqa ah in shucuubta Afrika ay danta ugu jirto in Maxkamadda ICC ay shaqayso oo waliba intan ay ka awood badan tahay oo aan loo adeegsan karin codka Veto-ga in lagu difaaco dawladaha ay ka midka tahay Itobiya ee sida cadaanka ah u gumaadaysa shacabka, qaarkoodna uga barakicinaysa dhulkii ay daganaayeen ka awoow, say u siiso shirkado ama u soo dajiso qawmiyadda Tigreega.
Dhibaatada sahacabka S.Ogadenya ay Itobiya u gaysatay oo diiwaan gashan ma noqon doonto wax lagu duudsiyo Maxkamadda ICC waxay wadaa midab takoor. Itobiya hadday daacad ka tahay arinta Xuquuqul Insaanka waa inay baadhaaitaan madax banaan ku samaysaa dhibaatada loo gaystay shacabka, haddii aanay diyaar u ahayn ama ay ka awood badan yihiin xukuumadda gacan-ku-dhiiglayaasha xasuuqa ka wada Ogadenya iyo meel kale oo ka mid ah Itobiya, waa inay ogaataa in la fahmayo ujeedada ay ka leedahay ololaha ay ku qaaday maxkamadda caalamiga ICC.